घर जग्गा कानून | Law & More | आइन्डहोभेन र एम्स्टर्डम
घर जग्गा कानूनमा अचल सम्पत्ति सम्बन्धी सबै कानूनी पक्षहरू छन्। हामी मा Law & More अस्थायी सम्पत्ति खरीद र बिक्रीको सवालमा विवाद वा विवाद उत्पन्न भएको खण्डमा तपाईंलाई कानुनी सल्लाह दिन सहयोग गर्न सक्षम छन्। यसका अतिरिक्त हामी तपाईंलाई निर्माण कानून र भाडा कानूनको क्षेत्रहरूमा कानूनी सल्लाह दिन सक्दछौं।
वास्तविक एस्टेट कानून सहयोग आवश्यक छ?
एक वास्तविक स्थापना कानून वकील मा कल गर्नुहोस्
> भाडा कानून
> व्यापार आवास को खरीद
> Eigen bedrijf en स्किडेन
निर्माण क्षेत्र भित्र एक उद्यमी को रूप मा तपाईं बिभिन्न पार्टीहरूको एक धेरै संग सहयोग। प्रिन्सिपल, आर्किटेक्ट र ठेकेदारहरूले स्पष्ट नियुक्ति गर्नुपर्दछ, किनकि यी पार्टीहरूको प्रत्येकको क्रियाकलाप एक अर्कासँग नजिकको सम्बन्धित छ। निर्माण प्रक्रिया भित्रको सहकार्यको बहुताको कारण, प्रत्येक पक्ष कानूनको भित्र राखिएका धेरै दायित्व र अधिकारहरूको लागि बाध्य छ। सहयोगको जटिलताको परिणाम स्वरूप, सबै प्रकारका कानुनी मुद्दाहरू उठ्न सक्छन्। अर्को पक्ष प्रति तपाईको दायित्व र अधिकार के हो? संरचनात्मक गल्तिको परिणामको रूपमा क्षतिको खण्डमा कसलाई उत्तरदायी मान्न सकिन्छ। Law & More तपाईंसँग कानूनी सल्लाह प्रदान गर्ने क्षमता छ र यदि आवश्यक परेको खण्डमा मुद्दा दायर गर्न सकिन्छ।
यसबाहेक, हामी तपाईंलाई सबै कानुनी नियमहरूको बारेमा सल्लाह दिन सक्छौं जुन निर्माणहरूले अनुपालन गर्नुपर्छ। यस तरिकाले कानुनी समस्याहरू, उदाहरणका लागि दायित्वको बारेमा, सकेसम्म रोक्न सकिन्छ।
छोटो रूपमा, हामी तपाईंलाई निम्न कार्यहरूको साथ अन्य चीजहरूको पनि प्रदान गर्न सक्छौं:
Struct संरचनात्मक प्रक्रिया भित्र एक अभिनेताका रूपमा तपाईंको अधिकार र दायित्वहरूको निर्धारण;
Construction नियम र सर्तहरू बारे परामर्श दिनुहोस् जुन एक निर्माणले अनुपालन गर्नुपर्दछ;
Istance तपाईंलाई उत्तरदायी मानिएको खण्डमा सहयोग।
Law & More दुबै भाडामा लिनेहरू र घरमालिकहरूलाई कानुनी समस्याहरू रोक्न र समाधान गर्न मद्दत गर्दछ। भाँडादार र घरमालिकको विशेष कानूनी दायित्व हुन्छ। यसले नियमन चरित्र समावेश गर्दछ जसको मतलब पक्षहरूले उनीहरूलाई उनीहरूका आफ्ना सम्झौताको साथ प्रतिस्थापन गर्न सक्दछन्। थप रूपमा, त्यहाँ भाँडा कानून भित्र अनिवार्य प्रावधानहरू छन्। एक व्यक्ति यी नियमहरू भन्दा फरक हुन सक्दैन, जुन सबैभन्दा पहिले भाडावालालाई सुरक्षा गर्ने अभिप्राय हो किनकि यो कमजोर पक्ष हो, सम्झौताबाट। यदि तपाईं यस्तो स्थितिमा अवस्थित हुनुहुन्छ जुन तपाईंको समकक्षले उसको सम्झौताको पालना गर्दैन भने, त्यहाँ थुप्रै कार्यहरू छन् जुन प्रयास गर्न सकिन्छ। त्यस्ता अवस्थाहरूमा तपाईंलाई आवश्यक कानुनी सल्लाह प्रदान गर्नका लागि तपाईं हामीलाई विश्वास गर्न सक्नुहुन्छ।
You यदि तपाईं घरमालिक हुनुहुन्छ भने भाडा सम्झौताको मस्यौदा;
Agreement सम्झौताको व्याख्याको बारेमा विवादहरू;
A कुनै भाँडादार वा घरमालिकले गरेका सम्झौताको पालनामा कार्य गर्दैन भने;
Ntal भाडा सम्झौताको अन्त्य।
व्यापार आवासको भाडा
यदि तपाइँ एक व्यापार संचालन गर्न चाहानुहुन्छ तपाइँलाई एक व्यापार स्थान आवश्यक पर्दछ। जब तपाइँसँग एउटा व्यवसाय आवास भाँडा गर्ने इरादा छ, एक भाडा सम्झौता ड्राफ्ट हुनुपर्दछ। व्यापार आवासको भाँडाको लागि त्यहाँ विशिष्ट कानूनी नियमहरू छन्। के हामी तपाईंलाई सहयोग गर्न सक्छौं निम्नानुसार छ
Ntal भाँडा सम्झौताको प्रजाति र सम्बन्धित अधिकार र दायित्वहरू निर्धारण गर्नुहोस्;
Ntal भाडा मूल्य संशोधनको मामलामा सल्लाह;
A क्लियरन्स सुरक्षाको बारेमा सल्लाह।
के तपाईं आकर्षक भवनतर्फ आकर्षित हुनुहुन्छ? यदि तपाईं यो भवन भाँडामा लिन चाहानुहुन्छ भने यो जान्नु आवश्यक छ कि गतिविधिहरू तपाईंको लक्षित छ कि छैन ... नगरपालिकाले भवनलाई सम्बोधन गरेको बेस्टमेमिंगको पालना गर्नुहोस्। Law & More जोनिंग योजनाहरूको ज्ञानको निपटानमा छ र यो ठाउँ निर्धारण गर्न सक्षम छ।
व्यापार आवास को खरीद
यदि तपाइँ तपाइँको व्यवसायको लागि एक सम्पत्ति किन्न चाहानुहुन्छ वा तपाइँ पहिले नै एकको स्वामित्व पाउनु भएको छ भने हामी तपाइँलाई निम्नलिखित विषयहरुका साथ सहयोग गर्न सक्दछौं।
Agreement खरीद सम्झौताको वार्ता;
Agreement सम्झौताको स्पष्टीकरण;
L घर मालिक द्वारा सम्झौताको उल्ल ;्घन;
Agreement सम्झौताको अन्त्य;
G धितो र वित्तीय संरचना।